[admin] : a.: Anaram-bibikely any anaty rano tahatahaka ny voangory ka lavalava boribory ny tenany sady voarakotra hoditra mafy, fa ny tongony aoriana no entiny mivoy rano. Ahitsio
[admin] : a,: Mitovy amin'ny Kotrokotrobato. Ahitsio
[admin] : a.: Mitovy amin'ny Kotana. Ahitsio
[admin] : a.: Karazam-boronkely tsara tarehy, misy sangany, manga feo. Ahitsio
[admin] : Mitovy amin'ny Kononkonona. Ahitsio
[admin] : a.: Kilalao fanaon' ny ankizy taloha rehefa tonga ny fety lehibe toy ny fetim-pirenena: izy ireo no mahandro ny sakafony eny ankalamanjana, indraindray amin'ny vilany na fitaovana kely antonona azy. Ahitsio
[admin] : o.: Anarana karazam-balala. Ahitsio
[admin] : a.: Anaran-kafa ilazana ny ondrindrano. Ahitsio
[admin] : a.: Teny ifanomezana miafina, tetika iraisana any an-takona: Nanao tsikombakomba ianareo roa lahy ka samy hosazina. ¶ M.h.: Kaomiberaka,komahay. Ahitsio
[admin] : (tsikoko) p.t.: Be tsikoko, tserohina. Ahitsio
[admin] : a.: Loto mitankosina amin'ny hoditra; tseroka. i t.i.f.: Tsikokoina. - F.-p.: Mihaingo ambony tsikoko: manao tsara izay hitan'ny maso fotsiny fa tsy miraharaha izay tsy hita. Ahitsio
[admin] : a.: Hazo boribory sady mbola tanora fanao eo afovoan'ny trano tomboka mba hanohana ny hazofisaka mitana ny tafo. Ahitsio
[admin] : a.: Zavamaniry fanaovana fanafody. •Koinkoina, taraina misy moimoy. i t.i.f.: Tafatsikoinkoina 1 manatsikoinkoina, fanatsikoinkoina, mpanatsikoinkoina 1 anatsikoinkoinana, fanatsikoinkoinana 1 mitsikoinkoina, fitsikoinkoina, mpitsikoinkoina 1 itsikoinkoinana, fitsikoinkoinana 1 mahatsikoinkoinana. Ahitsio
[admin] : Mitovy amin'ny Kohonkohona. Ahitsio
[admin] : (Btm) a.r Anaram-boron-dia sahala amin' ny akoho. Ahitsio
[admin] : a.: Fihetsiketsika; fitsipatsipaka, fitrifantrifana. - t.i.f.: Tafatsikofokofoka 1 mitsikofokofoka, fitsikofokofoka, mpitsikofokofoka / itsikofokofohana, fitsikofokofohana 1 mahatsikofokofoka. Ahitsio
[admin] : a.: Karazan-kazo madinika mamoa menamena mipetaka avy hatrany amin' ny taho. Ahitsio
[admin] : a.: Zavamaniry misy raviny bebe no-fo. Ahitsio
[admin] : a.: Bibikely an-drano, karazana fandiorano. malifaliana na indraindray Ahitsio
[admin] : a.: Jer. Tsikorovana. Ahitsio